पूजालाई के को डर ? – Khabar Silo
पूजा शर्मालाई सफल नायिकाको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । स्टारडम भएकी नायिकामध्ये एक नायिका हुन्, पूजा । ‘प्रेम गीत’बाट चर्चामा आएकी पूजालाई ‘म यस्तो गीत गाउँछु, रामकहानी’ लगायतका चलचित्रले अझै उचाइमा पुर्याएका छन् ।
यसैले त उनलाई अहिले चलचित्रमा लिनका लागि निर्माताले राम्रै रकम खर्च समेत गर्ने गरेका छन् । कात्तिक ८ गतेबाट पूजा अभिनित नयाँ चलचित्र ‘पोइ पर्यो काले’ रिलिजको तयारीमा छ । तर, यो चलचित्रको भूमिकामा आफूलाई दर्शकले नरुचाउने कुरामा पूजालाई निकै डर लागिरहेको छ । पूजा भन्छिन्–‘चलचित्रको पहिलो हाफमा त म पूर्ण रुपमा नेगेटिभ क्यारेक्टर जस्तो देखिन्छु । मेरो क्यारेक्टरलाई कसैले मन पराउनु हुन्न होला । मलाई यो कुराले डर लागिरहेको छ ।’
पूजालाई प्राय लभस्टोरी चलचित्रमा देख्ने गरिन्छ । तर, यो चलचित्र भने पूर्ण रुपमा कमेडी कथामा बनेको छ । आखिर पूजालाई कमेडी चलचित्रमा काम गर्ने इच्छा किन भयो त ? पूजा भन्छिन्–‘कलाकार भएपछि सधै एउटै किसिमको काम गर्नुहुन्न । त्यसैले केही नयाँ काम गर्ने इच्छा भएर नै यो चलचित्रमा काम गरेकी हुँ ।’ चलचित्रको विषयबस्तु पूजाको पहिलो आकर्षण थियो ।
शिशिर राणाको निर्देशनमा बनेको यो चलचित्रमा सौगात मल्ल, श्रृष्टि श्रेष्ठ र आकाश श्रेष्ठको पनि मुख्य भूमिका छ । किरण नेपालीको प्रस्तुतकर्ता रहेको यो चलचित्रमा राजिव गुरुङ ‘दीपक मनाङेगे’ र सरोज नेपालीको लगानी छ । चलचित्रको कार्यकारी निर्माता अमला देवी राई हुन् ।
बलिउडका किंग खानको रुपमा परिचित शाहरुख खानले आफ्नो छोरा अभिनयका लागि ठिक नभएको बताएका छन् । उनले यसको कारण थुप्रै पटक बताइसकेका पनि छन् । शााहरुखले थुप्रै पटक उनका छोरा अभिनयमा नभई फिल्म निर्माणमा रुची राख्ने बताइसकेका छन् । आर्यन यतिबेला अमेरिकामा फिल्म निर्माणको पढाई पनि गरिरहेका छन् । केही दिन अघि एक कार्यक्रममा कुरा […]
मुम्बई। चर्चित कमेडियन कपिल शर्माकी श्रीमती गिन्नी चतरथको बेबी शावर सेरेमनी भइसकेको छ। उक्त सेरेमनीका केही तस्वीर समाजिक संजालमा भाइरल भइरहेका छन्। उता, बेबी शावरमा पुगेकी भारती सिंहले पनि समारोहको इनसाइड फोटो आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा शेयर गरेकी छन्। आइतबार साँझ भएको गिन्नीको बेबी शावरमा भारती सिंह, माही, विज, कश्मिरा शाह, कृष्णा अभिषेक, कीकू शादरा उपस्थित […]